အနံ့မပြင်သည့် စပရေးကော် SP Low VOC
အနံ့မပြင်သည့် စပရေးကော် SP Low VOC, စပရေးကော်, ကော်
ဖေါ်ပြချက်များ။ ။ သန့်ရှင်သည့်အဆောက်အအုံနှင့်အသုံးပြုသူသို့ အန္တရာယ်ကင်းသောအသုံးပြုမှုအစီအစဉ်တွင် အသုံးပြုရန် Low VOC , Low Formaldehyde (နှင့်) Non-Toluene ဓာတုတို့ကို မဲ့သည့် ပရီမီယမ်ကော်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်ကပ်ကိရိယာနှင့်အတူ အသုံးပြုရန် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်သည်။
2. ပစ္စည်းပေတွင် SP low VOC ကော်ကို ဘီး (သို့) သံလက်ဖြင့် နှစ်ဘက်ကပ်ပါ။
5. အတိုအစလောင်းရန် တင်နာ DAT Thinner (E123) ကို သုံးပါ။
အနံ့မပြင်သည့်ကော် LP Low VOC
အနံ့မပြင်သည့်ကော် DAT GP-LOW SMELL
အနံ့မပြင်သည့်ကော် GP LOW VOC
အနံ့မပြင်သည့် စပရေးကော် SBR Spray
အနံ့မပြင်သည့် စပရေးကော် DAT SP LOW SMELL ကုန်ပို့လွှာရယူရန်
အနံ့မပြင်းသည့် ကော် DAT LP LOW SMELL ကုန်ပို့လွှာရယူရန်
ကနြောျတို့ CLMV ဖို့ထိုငျးမှာရှိတဲ့လုပျငနျးရှငျတှေ, တငျသှငျး, ပို့ကုနျလုပျငနျးရှငျမြား, ရငျးနှီးမွှုပျနှံသူမြားနှငျ့ဝနျဆောငျမှုပေးနှငျ့အတူခြိတျဆကျပါ။
ထိုငျးစကျမှုလုပျငနျးကျဘျဆိုကျမှလှိုကျလှဲစှာကွိုဆိုပါသညျ။ ထိုငျးစကျမှုလုပျငနျးနှငျ့ထိုငျးထုတျကုနျ Gateway မှာ။ သငသြညြ CLMV နိုငျငံမြားဒသေဆိုငျရာဘာသာစကားမြားအှနျလိုငျးလကျမှတျကွောျငွာနှငျ့ကုမ်ပဏီပရိုဖိုငျးနှငျ့အတူထူးခြှနျဒသေခံဘာသာစကားမြားနှငျ့အတူထိုငျးကုနျပစ်စညျးမြားကိုဝငျရောကျနိုငျပါတယျ။ ထိုငျးစကျမှုလုပျငနျးသတငျးအခကြျအလကျကုနျထုတျစှမျးအားစံ၏လကျမှတျဖွငျ့လညျပတျခဲ့သညျ ..